Wararka - Xagee lagu isticmaali karaa maro silica oo sarreeya
Maro silica sare leh ayaa ah nooc ka mid ah maadada fiber-ka-imanka ah ee heerkulka sarreeya. Sababtoo ah sifooyinka kiimikada ee xasilloon, iska caabinta heerkulka sare iyo caabbinta soo-kabashada, alaabooyinka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa aerospace, metallurgy, warshadaha kiimikada, qalabka dhismaha, ilaalinta dabka iyo meelaha kale ee warshadaha. Wax aan la aqbali karin, heerkulkiisu sarreeyo (500 ~ 1700 ℃), qaab dhismeedka is haysta, xanaaq la'aan, qaab jilicsan iyo adkeysi.
Way ku habboon tahay in lagu duubo walxaha iyo qalabka aan sinnayn. Dharka silica ah ee sarreeya ayaa sheyga ka fogeyn kara barta kulul iyo dhimbiilaha, wuxuuna gebi ahaanba ka hortagayaa gubashada ama go'doominta gubashada. Waxay ku habboon tahay alxanka iyo munaasabadaha kale oo leh dhimbiillo fudud oo dab sababi kara. Waxay iska caabin kartaa dhabaalka dhimbilaha, slag, alxanka spatter, iwm
Waxaa loo isticmaali karaa in lagu go'doomiyo goobta shaqada, la kala saaro lakabka shaqada, iyo in laga takhaluso halista dabka ee ka dhalan karta hawlgalka alxanka; sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dabool si fudud si wadajir ah looga dhex dhiso meel aamin ah, nadiif ah oo jaango'an oo shaqo leh. Maro silica oo sarreeya ayaa laga samayn karaa bustaha dabka, taas oo ah aaladda ilaalinta ugu habboon ee unugyada muhiimka ah ee nabadgelyada dabka ee nabadgelyada guud.
Waxaa loo isticmaalaa suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto, dukaamada waaweyn, hoteelada iyo meelaha kale ee madadaalada dadweynaha loogu talagalay shaqada shaqada kulul (sida alxanka, goynta, iwm). Codsiga bustaha dabka ayaa si toos ah u yareyn kara dhimbilaha, go'doominaya isla markaana xannibi kara waxyaabaha halista ah ee qarxa iyo waxyaabaha qarxa, wuxuuna xaqiijin karaa sharafta nolosha aadanaha iyo warshadaha.
Waxaan rumeysanahay inaad yeelan doonto faham cusub iyo faham ku saabsan marada silica sare aqriska ka dib. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato arrintan, waxaad fiiro gaar ah u yeelan kartaa degelkeenna, adoo rajeynaya inay ku caawiyaan.